လက်ကားဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် alkaline များအရောင်ချွတ်သည့်တည်ငြိမ်စေသည့်စက်ရုံနှင့်စျေးနှုန်းများ ဟွန်း
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် alkaline များအရောင်ချွတ်တည်ငြိမ်
၁။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်အယ်ကာလိုင်းအရောင်ချွတ်သည့်တည်ငြိမ်မှုသည်အထူးသဖြင့်ပါတနာ - ရေနွေးငွေ့ဖြစ်စဉ်တွင်ဝါဂွမ်း၏အယ်ကာလိုင်းအရောင်ချွတ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောတည်ငြိမ်မှုဖြစ်သည်။ Alkaline မီဒီယာတွင်တည်ငြိမ်စွာတည်ရှိနေမှုကြောင့်ရေရှည်တည်မြဲသောရေနွေးငွေ့တွင် oxidant သည်အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ အလွယ်တကူဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီး။
2. ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် alkaline များအရောင်ချွတ်သည့်တည်ငြိမ်စေမှုသည် silicate အသုံးပြုမှုကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်လုံးဝအစားထိုးနိုင်သည်။ သို့မှသာ silikat အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ပစ္စည်းကိရိယာများပေါ်တွင်သိုက်များမဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်အရောင်ချွတ်ထားသောအဝတ်များသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော hydrophilicity ရှိသည်။
(၄) စတော့ရှယ်ယာများထဲတွင် caustic soda နှင့် surfactant ပါဝင်မှုမြင့်မားသော်လည်း Stabilizing Agent 01 သည်တည်ငြိမ်သောကြောင့်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
၄-၆ ဆပိုမိုမြင့်မားသောဓာတုပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည့်မိခင်အရည်။
5. တည်ငြိမ်အေးဂျင့် 01 လည်း pad- သုတ်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်။
အသုံးပြုခြင်း - ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်နှင့်အတူဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်အရောင်ချွတ်စေသောတည်ငြိမ်စေသူ။
pH Value: 9.5 (10g / l solution)
Hard ရေတည်ငြိမ်မှု - ၄၀ ဒီဂရီ DH တွင်အလွန်တည်ငြိမ်သည်
pH ကိုအက်ဆစ် - အခြေတည်တည်ငြိမ်မှု - 20Bèတွင်အလွန်တည်ငြိမ်သည်
Chelating စွမ်းရည်: 1g တည်ငြိမ်အေးဂျင့် 01 mgr chelate နိုင်ပါတယ်။ Fe3 +
သော pH 10 မှာ 190
သော pH 12 မှာ 450
အခန်းအပူချိန်မှာ9လကြာသိုလှောင်ထား။0near အနီးရှိအပူချိန်မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာသိုလှောင်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။
၁။ တည်ငြိမ်အေးဂျင့် 01 သည်အထူးသဖြင့်ပါတနာ - ရေနွေးငွေ့ဖြစ်စဉ်တွင်ဝါဂွမ်း၏ alkaline များအရောင်ချွတ်ရာတွင်အသုံးပြုသောတည်ငြိမ်မှုဖြစ်သည်။ Alkaline မီဒီယာတွင်တည်ငြိမ်စွာတည်ရှိနေခြင်းကြောင့်ရေရှည် steaming တွင် oxidant သည်အခန်းကဏ္ oxid မှပါ ၀ င်သည်။ အလွယ်တကူဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီး။
2. တည်ငြိမ်အေးဂျင့် 01 ဆီလီကွန်အသုံးပြုမှုကြောင့်ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်သိုက်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုရှောင်ရှားနေစဉ်အရောင်ချွတ်သောအထည်ပိုကောင်း hydrophilicity ရှိနိုင်အောင်, silicate ၏အသုံးပြုမှုကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်လုံးဝကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။
4. Stustizing Agent 01 သည် caustic soda နှင့် surfactant ပါ ၀ င်သောစတော့ရှယ်ယာများ၌ပင်တည်ငြိမ်နေသဖြင့် ၄ င်း၏ ၆ ဆမှ ၆ ဆပိုမိုမြင့်မားသောဓာတုပစ္စည်းများပါ ၀ င်သောမိခင်အရည်ကိုပြင်ဆင်နိုင်သည်။
တည်ငြိမ်အေးဂျင့် 01 ကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်မထည့်သွင်းမီတိုက်ရိုက်ကျွေးမွေးသောရေချိုးထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။
5-8 ml / l တည်ငြိမ်အေးဂျင့် 01
50ml / ဌ 130vol ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်
360ml / l 360Bè caustic soda
3-4 ml / l ပိန်အေးဂျင့်
Pick-Up: 10-25%, ကွဲပြားခြားနားသောအထည်ပေါ်မူတည်
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်အလုပ်လုပ်ရန် 6-12 မိနစ်ခန့်ရေနွေးငွေ့
8 ml / l တည်ငြိမ်အေးဂျင့် 01
8-15ml / l 480Bèဆိုဒီယမ် silikat
၄-၆ မီလီမီတာ / လီအောင်ဆေး
2-5 ml / ဌ Chelating အေးဂျင့်
12-16 နာရီအအေး - သုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်